Noraràna tsy hiditra tamin’ny resaka nataon’i Poutine tao Budapest ny sasany tamin’ireo vahiny mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2019 5:59 GMT
Péter Szijjártó, Minisitry ny raharaha ivelany sy ny varotra ao Hongria, miarahaba an'i Poutine, filoha rosiàna, tao Budapest ny 30 Oktobra 2019. Sary an'ny Minisiteran'ny raharaha ivelany sy ny varotra, fanomezandàlana avy amin'ny kormany.hu.
Ity tantara ity dia navoaka tao amin'ny Atlatszo, sampanasa iray mpanadihady an'ny asa fanaovangazety hongroà, .Ny dika omena eto ambany dia tafiditra ao anatin'ny fiarahana miasa amin'ny Global Voices.
Toy ireo Hongroà mpanao gazety mpanakiana ny governemanta, ankehitriny indray koa dia ireo vahiny mpanao gazety miasa ao amin'ny firenena no misedra fanakànana tsy hahazo vaovao. Tsy nambara talohan'ny hisiany ilay kaonferansa iraisampirenena natao tao Budapest tamin'ny 30 Oktobra nandritra ny fitsidihan'i Poutine, tsy natao mazava ny dingana fisoratana anarana, ary andro iray talohany dia marobe ireo vahiny mpanao gazety no tsy nahalala akory aza raha toa ka mba nojeren'ny tao amin'ny biraon'ny praiminisitra ihany ny fangatahan-dry zareo handray anjara. Taty aoriana kely ny sasany tamin'ireny mpanao gazety ireny dia naharay valiny nilaza fa hoe tsy ampy intsony ny toerana ao amin'ilay kaonferansa noho ny hamaroan'ireo Rosiàna sy Hongroà mpanao gazety liana tonga ao.
Nandritra ny herinandro nizorana ho any amin'ilay fitsidihan'i Poutine, nisy fifanakalozana tsy tapaka nifanaovana tao anatin'ny lisitry ny imailak'ireo vahiny mpanao gazety miasa ao Hongria momba ny fotoana sy ny toerana hanaovana ilay resaka ofisialy ho an'ny mpanao gazety, ary izay fomba atao hisoratana hanatrika izany, satria tsy nisy mihitsy fanasàna voarain'ny Hungarian International Press Association (HIPA) amin'ny maha-fikambanana azy, na ireo ampahany tsy azo tsinontsinoavina misy ireo vahiny mpanao gazety miasa ara-dalàna ao Hongria.
Na teo aza io, araka ny voalazan-dry zareo masoivohom-baovao vahiny marobe, “tsy mora, saingy tafita ihany nony farany” tamin'ny fisoratana anarana hanatrika ilay kaonferansa iraisampirenena ho an'ny mpanao gazety. Ny hafa, anefa, milaza fa tsy vao iny no voalohany nisedran'izy ireo olana rehefa hanatrika resaka nokarakarain'ny governemanta hongroà ho an'ny mpanao gazety. Milaza izy ireo fa matetika amin'ny minitra farany vao ampahafantarina ny hetsika tahaka izany, na efa vita mihitsy aza, toy ny hoe ataon'ny governemanta fanahy iniana mihitsy ny manilika an-dry zareo.
Ao anaty lahatsoratra am-bilaogy, manome antsipirihany momba ny ezaka nataony mba hahazoana miditra tamin'ny kaonferansa ho an'ny mpanao gazety nandritra ny fitsidihan'i Poutine ilay iraky ny sampandraharaha alemàna mpilaza vaovao tsy miankina. Ny fialantsiny azony momba ny tsy nandraisana ny fisoratany dia hoe ‘tsy fahampian'ny toerana':
Herinandro lasa izay, nantsoiko an-telefaona ny biraon'ny praiminisitra mba hahafantarana momba ilay fitsidihana. Tsy misy na inona na inona – izay no valiny. Na inona na inona hetsika goavana nitranga tato anatin'ny taona vitsy lasa, amin'ny ankapobeny dia tsy mandefa fampahafantarana mihitsy ry zareo raha tsy andro iray alohan'ny fotoana voatondro hanaovana azy vao mandefa ireo rakitra ilaina momba ny fandraisana anjara. Araka izany, tsy dia natahotra ny ho very inona loatra aho. Saingy diso ny eritreritro rehefa natao ny kajy. Mba hahazoana antoka, ny Talata maraina dia nandefa imailaka tany amin'ny biraon'ny praiminisitra aho (birao fifandraisana amin'ny gazety vahiny), ary satria tsy nisy valiny tonga, ora iray sy sasany taorian'izay dia nanontany ihany koa ny lefitry ny sekreteram-panjakana, Bertalan Havasi, tamin'ny imailaka aho raha toa ka misy fanomezandàlana ho an'ilay hetsika. Fotoana fohy taorian'izay, nisy ramatoa mahafatifaty avy amin'ny biraon'ny praiminisitra niantso ahy nilaza fa voarain-dry zareo ny taratasiko, saingy indrisy fa tsy afaka intsony handray fangatahana fisoratana anarana ry zareo satria efa feno ny toerana ahafahana mandray olona ao amin'ilay hetsika. Nanontaniako ny maha-marina izany, satria tsy nanaovana fampahafantarana na taiza na taiza ilay izy, tsy nisy fanasàna voaray, tsy nisy zavatra momba ilay hetsika tany anatin'ny fandaharampotoana ofisialy tao amin'ny kormany.gov.hu. Valiny azoko ny hoe hetsika manokana avy amin-dry zareo Rosiàna sy Hongroà mpanao gazety ny fisoratana anarana nataony ka tsy misy toerana tavela intsony.
Tao anatin'ilay lisitra imailaka ifandefasana, vahiny iray mpanao gazety no nanoritsoritra ihany koa ny fomba nanilihana azy tsy hanatrika ilay kaonferansa ho an'ny mpanao gazety:
Voalohany indrindra dia tsy nisy imailaka, avy eo tsy nisy fanomezandàlana manasa na avy amin'ny biraon'ny Kovacs aza (Zoltán Kovács, sekreteram-panjakana miadidy ny fifandraisana iraisampirenena), ankehitriny tsy misy fandaharampotoana navoakany momba ilay hetsika tao amin'ny tranonkalan'ny governemanta, tsy misy na inona na inona ao amin'ny MTI (Masoivohom-baovao Hondroà). Mihevitra aho fa tokony hahay mamantatra ny am-po tsy miloaka isika rehetra.
Voalaza tao anatin'ilay lisitra imailaka ihany koa fa ny marina dia manohitra ny Fanambarana tao Helsinki izy, fantatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny hoe Ny Hetsika Farany tao Helsinki, vokatra avy amin'ilay kaonferansa tamin'ny 1975 momba ny fiarovana sy ny fiarahana mihetsika ho an'ny fandriampahalemana tao Eorôpa izay nitarika ho amin'ny fametrahana ny OSCE, raha misy governemanta iray tsy mampandre ireo iraky ny gazety vahiny na manilika azy ireny tsy ho afaka hanatrika resaka ofisialy natao ho an'ny gazety.
Mpanao gazety iray hafa manana fahazoandàlana hiasa ao Hongria no namintina ny fomba nataony hahazoana fahafahana miditra tamin'ilay kaonferansa nataon'i Poutine ho an'ny gazety:
Natomboko tamin'ny fandefasana imailka ho an'ny biraon'ny fifandraisna iraisampirenena mba hiresahana io hetsika io, vao maraimben'ny 25 Okt, izay efa toy ny taraiky sahady, saingy mbola nanantena zavatra avy amin-dry zareo ihany aho avy eo ary nanapaka hevitra hanontany rehefa tonga saina fa tsy nisy na inona na inona ho azo. Roa minitra taorian'izay dia naharay valny aho, nilaza hoe, “Misaotra anao tamin'ny fangatahanao. Ampahafantarinay anao amin'ny fotoana mahamety azy ny antsipirihany momba ny fisoratana.” Dia nanantena aho fa hitàna ny teny nomery ry zareo. Omaly, nandefa hafatra iray hafa aho, izay tsy naharaisana valiny. Ny hafatra nalefako io maraina io dia hoe “Satria rahampitso ilay hetsika dia mba te-hahazo antoka fotsiny aho raha nahazo fahazoandàlana. Mba azonareo alefa ve, azafady, ny antsipirihany?” nahazoako valiny izay nilaza fotsny hoe “Mr XY, Birao miandraikitra ny fifandraisana amin'ny gazety ao amin'ny praiminisitra” [imailaka iray tsy nisy votoatiny, fa fiarahabana sy sonia fotsiny]. Tsy nahazo valiny ny imailaka fanampiny nalefako nangataka ny fomba hahafahako mifandray amin-dry zareo, toy izany koa ireo imailaka nalefako ho an'ny bertalan.havasi@mk.gov.hu sy ny ktk@mk.gov.hu nangatahako fahazoandàlana .
Bertalan Havasi no lehiben'ny birao misahana ny fifandraisana amin'ny gazety ao amin'ny governemanta hongroà, raha ny ktk@mk.gov.hu kosa indray no imailaka ofisialy ho fisoratana anarana ho an'ireo vahiny mpanao gazety rehefa misy hetsika ataon'ny governemanta.
“Tsy tranga maningana io, tato ho ato dia tena lasa nihasarotra ny fifandraisana teo amin'ny governemanta hongroà sy ireo iraky ny gazety vahiny miasa ao amin'ny firenena” – hoy ilay Danoà mpanao gazety, Runa Hellinga, tao anaty fanambaràna iray ho an'ny Atlatszo. Efa 20 taona izy izao no mpikambana tao anatin'ny fikambanana hongroà ho an'ireo vahiny mpanao gazety (ary filohan'io hatramin'ny taona lasa teo).
Mibaribary be izao fa an-taona maro no efa voahelingelina ny asan'ny HIPA. Ny taona voalohany niasan'ny governemantan'i Orbán, nandefa minisitra matetitetika ihany ry zareo, saingy amin'izao androntsika izao, lasa toy ny tsy mety intsony ny mikarakara fihaonana iarahana amin'ireo minisitra na mavoisohon'ny governemanta. Tsy maintsy mandalo amin'ny Mr. Kovács ny raharaha rehetra, izay manondro mazava fa araka ny lazainy, tsy ilaina ny HIPA. Ny zavatra niainako manokana niaraka tamin'i Kovacs tamin'ny naha-mpitondrateny azy koa dia somary manahirana ihany raha tsorina, fony aho voalohany nikarakara resaka niarahana taminy. Tamin'ny voalohany dia tsy tonga fotsiny izao izy, ny faharoa, nanana dimy minitra tena tsy andry izy .
Ny filohan'ny HIPA amin'izao fotoana izao, Kester Eddy, nanamafy toy ity tao anaty fanambaràna ho an'ny Atlatszo::
Efa hatramin'ny 2012 teo, ary indrindra fa nanomboka hatramin'ny 2014, nahiliky ny governemanta hongroà hatrany ny fikambanan'ireo vahiny mpanao gazety miasa ao Hongria. Na nisy aza ny fanasàna tsy tapaka, tsy hoe fotsiny tsy iresahan'ny praiminisitra Orban ny HIPA, fa lavin'i Zoltan Kovács ihany koa ireo fangatahana fitenenana. Taorian'ny 2014 mandra-pahatongan'ny tany amin'ny 2016 tany ho any, nanomboka nanao adihevitra ihany koa ho anà vondrona madinika voafantina ny governemanta. Tsy nahafantatra aho, ary tsy mahafantatra raha mbola ataony ihany izany. Ho an'ny tenako manokana, namaly ireo fanontaniana sy fangatahana nalefa (ara-potoana) taminy ny biraon'i Zoltan Kovacs.